Imithombo yeendaba yeNtlalontle: Ungalandeli iiAkhawunti zeTwitter eziFileyo
Ukuba ufuna ukusebenzisa isixhobo semidiya yoluntu iTwitter ukwandisa ukuthengisa kwakho, kuya kufuneka ususe iiakhawunti ezifile kumjelo wakho we-Twitter. Emva kwayo yonke loo nto, ukulandela iqela labantu abangathethiyo ngeTwitter okanye, okubi ngakumbi, ngabagaxekile, kukuchitha nje ixesha. Xa kuziwa kwimetrikhi ye-Intanethi, ukulandela ezi ntlobo zeakhawunti kunokuhlisa amanani akho.
Xa ubaphandile abantu obalandelayo kuTwitter kwaye uzive ilixesha lokuba ungalandeli abanye babo, jonga Ukukhupha . Inkqubo isebenzisa i-Twitter API (usetyenziso lwenkqubo yenkqubo) ukungalandeli abo ubakhethileyo kuluhlu lwabantu abangakhange bahlaziye iakhawunti yabo kwinani elimiselweyo leentsuku.
Indawo icela ukuba ungene kwiakhawunti yakho ye-Twitter. Yenza njalo, kwaye indawo yesiza kunye nokusila okwethutyana kwaye emva koko ubonise uluhlu lweakhawunti efileyo, njengaleyo iboniswe kulo mzobo, kunye nomhla wokugqibela wokuhlaziywa kweeakhawunti kwisiza. Ungothuka linani leziphumo.
Ukubhabha kuphela kwioyile kukuba kufuneka ucofe ukongeza uphawu lokutshekisha ecaleni kweakhawunti nganye ofuna ukuyilandela. Emva kokuba ugqibile konke ukucofa, cofa iqhosha elithi Ungalandeli ukuKhetha iiTweeps ezikhethiweyo.
Iqonga lasimahla elingaphezulu lokufumana ii-akhawunti ezigcwele ugaxekile kunye nezo zifileyo TwitCleaner . Indlela yabo-iTwitter imalunga nomgangatho hayi ubungakanani - isandi kwaye iingxelo zabo zineenkcukacha kakhulu. Emva kokuba ungene kunye neakhawunti yakho ye-Twitter kwisiza, bakha ingxelo yangoku kwaye bakuthumele ngqo kwi-Twitter xa yenziwe.
Bavavanya iakhawunti yakho ngokunzulu kwaye abafumani kuphela iiakhawunti ezingasekhoyo kodwa nabo basebenzisa iTwitter njengendawo yokukhuthaza ii-ajenda zabo. I-TwitCleaner ifumana iiakhawunti ezingamameli. Kucetyiswa kakhulu.
Ukuzibandakanya kwabo bangadibaniyo nawe
Inxalenye yolonwabo kunye nokuzibandakanya kwi-Twitter kukulandela abo bakhetha ukukulandela. Ngokusebenzisa uluhlu lwabucala lwe-Twitter, ungabukela iqela labahlobo abakhethiweyo, nokuba ngaba ngabathengi okanye usapho.
Nangona kunjalo, amathuba okuba abanye abantu bakulandele kodwa khange ulandele umva kuba uxakeke kakhulu zezinye izinto. Yiya e JustUnlandela kwaye ungene ngeakhawunti yakho ye-Twitter. Uya kubona uluhlu lwabo bangakulandeliyo kunye nabo bangabalandeli kodwa ungalandeli emva, njengoko kubonisiwe kumzobo.
Apha ngezantsi kwezazisi zabo kunye nee-avatari linani labantu ababalandelayo, inani elilandelayo kunye nenani elipheleleyo leeTweets. Uyakufumana abanye abakhafula iiTweets ezingenantsingiselo okanye iTwitter encinci ngokwenani labantu ababalandelayo; olu lwazi lunokuba sisiphelo sokuba ukhetha ukubalandela. Iakhawunti enye yayinabalandeli abangaphezu kwe-19,000, elandelwa ngaphezulu kwama-20,000, kwaye iye yathumela nje amaxesha angama-643. Kunuka iintlanzi. Izibalo ezinje ngeeflegi ezibomvu zogaxekile.
Awunakulandela okanye ulandele abantu abangama-25 ngotyelelo ngalunye ngaphandle kwentlawulo. Ngama- $ 9.99 ngonyaka, unokungalandeli okanye ulandele inani elingenamda labantu kutyelelo ngalunye.
Ngaba i-tylenol inayo i-acetaminophen
iziphumo ebezingalindelekanga ze-diltiazem
indlela yokudubula subutex 54 411
windows 10 buyisela kumhla ongaphambili